ဘယျတော့မှ သီခငျြးဆိုမပွိုငျတော့ဘူးလို့ ဆိုလာတဲ့ အဆိုတျော ထိုကျကွီး – Daily Feed MM
Admin_John | November 16, 2020 | Cele | No Comments
ဖွိုးကြျောထိုကျကတော့ Melody World သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲကနတေဆငျ့ ဂီတလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ သူ့ အနနေဲ့ တဈကိုယျတျော အခှတှေလေညျး ထှကျရှိခဲ့သူဖွဈသလို Single Song တှလေညျး အမြားကွီး ထှကျရှိခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ။ သူကိုယျတိုငျ သီဆိုထားတဲ့” သစ်စာမရှိတဲ့ သစ်စာ” ဆိုတဲ့ သီခငျြးက ဖွိုးကြျောထိုကျအတှကျတော့ ပရိသတျအခိုငျအမာ ရရှိခဲ့တဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈ ပါတယျ။လကျရှိ နှုတျထှကျလိုကျရတဲ့ The
Voice Myanmar သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲက သူ့အတှကျ နောကျဆုံး ပွိုငျပှဲဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ယခုရကျပိုငျးမီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာတော့ ဖွိုးကြျောထိုကျက သူ့အနနေဲ့ စိတျနာလို့ သီခငျြးဆို ပွိုငျပှဲတှေ ဘယျတော့ မှမပွိုငျတော့ဘူးလို့ ပွောလာခဲ့တာပါကြှနျတျောကအစကတညျးက Battle Round မှာကတညျးက ကြှနျတျောမပွို ငျတော့ဘူး လုပျတာ….ဒါပမေယျ့ သူတို့နဲ့ စာခြုပျမှာလကျမှတျထိုးထားရတာဆိုတော့ ဆကျပွိုငျဖွဈသှားတာပေါ့…. သူတို့နဲ့စာခြုပျ
မှာက အဆုံးထိပွိုငျရမယျဆိုတာက ပါတယျဆိုတော့လေ နောကျထပျ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲဆိုတာတော့ ကြှနျတော့အတှကျရှိလာတော့မှာမဟုတျပါဘူး… ကြှနျတော့ ဘဝမှာ သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ၄ ခုအထိပွိုငျဖူးတယျ ….အခု The Voice ကနောကျဆုံးပွိုငျပှဲပါပဲ… နောကျဘယျလောကျပဲ ဆုကွေးမြားမြား ကြှနျတျောတသကျလုံး ပွိုငျဖွဈတော့ မှာမဟုတျပါဘူး….အဲ့ဒီရဲ့ Feedback ကိုကြှနျတျော မခံနိုငျဘူး…ကြှနျတျောကလူပြိုဆိုလညျး တမြိုးကောငျးတာပေါ့ …. အခုက မိနျးမ
နဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ ထိနျးခြုပျရတာတှရှေိတယျ လူလှတျဆိုရငျတော့ ဘာပွောကောငျးမလဲ…မိနျးမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ သညျးခံရတာတှရှေိတယျ အဲ့ဒီတော့ အဆငျမပွပေါဘူး…ဒါနောကျ ဆုံးပါပဲ။သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲကို စိတျလညျးကုနျတယျ နောကျပွီး ကံမပေးတာ လညျးပါတယျ…. Comment တှမှောကွညျ့ရငျသိနိုငျပါတယျ စနျးမရှိဘူးတို့ တရာဖိုးသုံးပုဒျ ဆိုတယျဆိုတဲ့ မနျ့တှလေညျးသိရပါတယျ သီခငျြးဆိုတာ တရာဖိုး သုံးပုဒျလို့ အတနျးအစားသတျမှတျလို့မရပါဘူး
ကြှနျတျောတို့ဆိုတဲ့သီခငျြးတှကေ တရာဖိုးသုံးပုဒျသတျမှတျလို့မရပါဘူး.. ကိုစိုးသူသီခငျြးကို ကြှနျတျောဆိုသလို ပွနျပွောငျးပွီးဆိုကွညျ့ပါ သိပါလိမျ့မယျ …. ဒီသီခငျြးက လူငယျတှမေသိနိုငျတော့တဲ့သီခငျြးမို့လို့ ကြှနျတျောက ပွနျဖျော ထုတျဆိုတာပါ…တရာဖိုးသုံးပုဒျလို့ ဝဖေနျတာမြိုးတော့ မလုပျသငျ့ပါဘူး…ကြှနျတျောတို့နိုငျငံကလူတှကေ ကိုဆောငျးဦးလှိုငျပွောသလိုပဲ ဆဲရငျး ဆဲရငျး ဆငျးရဲသှားကွတဲ့သူတှလေို့ ပွောရမလိုဖွဈနတေယျ မွနျမာနိုငျငံမှာနကွေတဲ့
သူတှအေခငျြးခငျြး ဘာမှ ထိခိုကျနဈနာအောငျလုပျထားတာမြိုးလညျးမရှိပဲနဲ့ ဘလိုငျးကွီးဆဲရေးနတောက အဆငျမပွဘေူး လို့ကြှနျတျောမွငျမိပါတယျနောကျပွီး နတေို့ငျးကြှနျတေျာ့မှာ အဆဲခံနရေတာ ကွာလာတော့လညျးပေါကျတယျ … ကောငျးလညျးအဆဲခံရတယျ … အလှူလုပျ … ပရဟိတလုပျတော့လညျး ဒီကောငျဗနျးပွတာပါဆိုပွီး အမြိုးမြိုးမွငျနကွေတော့ ကြှနျတျောက ဘာဆကျလုပျရမလဲ လို့ တှေးမိတယျ နောကျဆုံးဆဲတဲ့သူတှကွေတော့လညျး
Fake Account တှနေဲ့ဆိုတော့ ပွောရခကျတယျ ” လို့ ဖွိုးကြျောထိုကျက သူကွုံခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှကေို ပွောပွလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော။အဆုံးထိဖတျရှုပေးကွလို့ ကြေးဇူးတငျ ပါတယျနျော။
ဖြိုးကျော်ထိုက်ကတော့ Melody World သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲကနေတဆင့် ဂီတလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေတွေလည်း ထွက်ရှိခဲ့သူဖြစ်သလို Single Song တွေလည်း အများကြီး ထွက်ရှိခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် သီဆိုထားတဲ့” သစ္စာမရှိတဲ့ သစ္စာ” ဆိုတဲ့ သီချင်းက ဖြိုးကျော်ထိုက်အတွက်တော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ် ပါတယ်။လက်ရှိ နှုတ်ထွက်လိုက်ရတဲ့ The
Voice Myanmar သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲက သူ့အတွက် နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ ဖြိုးကျော်ထိုက်က သူ့အနေနဲ့ စိတ်နာလို့ သီချင်းဆို ပြိုင်ပွဲတွေ ဘယ်တော့ မှမပြိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောလာခဲ့တာပါကျွန်တော်ကအစကတည်းက Battle Round မှာကတည်းက ကျွန်တော်မပြို င်တော့ဘူး လုပ်တာ….ဒါပေမယ့် သူတို့နဲ့ စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားရတာဆိုတော့ ဆက်ပြိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့…. သူတို့နဲ့စာချုပ်
မှာက အဆုံးထိပြိုင်ရမယ်ဆိုတာက ပါတယ်ဆိုတော့လေ နောက်ထပ် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော့အတွက်ရှိလာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး… ကျွန်တော့ ဘဝမှာ သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ၄ ခုအထိပြိုင်ဖူးတယ် ….အခု The Voice ကနောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲပါပဲ… နောက်ဘယ်လောက်ပဲ ဆုကြေးများများ ကျွန်တော်တသက်လုံး ပြိုင်ဖြစ်တော့ မှာမဟုတ်ပါဘူး….အဲ့ဒီရဲ့ Feedback ကိုကျွန်တော် မခံနိုင်ဘူး…ကျွန်တော်ကလူပျိုဆိုလည်း တမျိုးကောင်းတာပေါ့ …. အခုက မိန်းမ
နဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ ထိန်းချုပ်ရတာတွေရှိတယ် လူလွတ်ဆိုရင်တော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ…မိန်းမနဲ့ကလေးနဲ့ဆိုတော့ သည်းခံရတာတွေရှိတယ် အဲ့ဒီတော့ အဆင်မပြေပါဘူး…ဒါနောက် ဆုံးပါပဲ။သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲကို စိတ်လည်းကုန်တယ် နောက်ပြီး ကံမပေးတာ လည်းပါတယ်…. Comment တွေမှာကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် စန်းမရှိဘူးတို့ တရာဖိုးသုံးပုဒ် ဆိုတယ်ဆိုတဲ့ မန့်တွေလည်းသိရပါတယ် သီချင်းဆိုတာ တရာဖိုး သုံးပုဒ်လို့ အတန်းအစားသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး
ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့သီချင်းတွေက တရာဖိုးသုံးပုဒ်သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး.. ကိုစိုးသူသီချင်းကို ကျွန်တော်ဆိုသလို ပြန်ပြောင်းပြီးဆိုကြည့်ပါ သိပါလိမ့်မယ် …. ဒီသီချင်းက လူငယ်တွေမသိနိုင်တော့တဲ့သီချင်းမို့လို့ ကျွန်တော်က ပြန်ဖော် ထုတ်ဆိုတာပါ…တရာဖိုးသုံးပုဒ်လို့ ဝေဖန်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး…ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူတွေက ကိုဆောင်းဦးလှိုင်ပြောသလိုပဲ ဆဲရင်း ဆဲရင်း ဆင်းရဲသွားကြတဲ့သူတွေလို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတဲ့
သူတွေအချင်းချင်း ဘာမှ ထိခိုက်နစ်နာအောင်လုပ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပဲနဲ့ ဘလိုင်းကြီးဆဲရေးနေတာက အဆင်မပြေဘူး လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်နောက်ပြီး နေ့တိုင်းကျွန်တော့်မှာ အဆဲခံနေရတာ ကြာလာတော့လည်းပေါက်တယ် … ကောင်းလည်းအဆဲခံရတယ် … အလှူလုပ် … ပရဟိတလုပ်တော့လည်း ဒီကောင်ဗန်းပြတာပါဆိုပြီး အမျိုးမျိုးမြင်နေကြတော့ ကျွန်တော်က ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ လို့ တွေးမိတယ် နောက်ဆုံးဆဲတဲ့သူတွေကြတော့လည်း
Fake Account တွေနဲ့ဆိုတော့ ပြောရခက်တယ် ” လို့ ဖြိုးကျော်ထိုက်က သူကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဆုံးထိဖတ်ရှုပေးကြလို့ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်နော်။